Ma Jabuuti baa saldhig looga dhigi doonaa ciidamada badda ee Itoobiya? | Radio Hormuud
Hasayeeshee wararkaas waxaa beeniyay safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Itoobiya, Maxamed Idiris Faarax. "Warkaas waa war jaraa'idada Itoobiya dhex socda, kuwaas oo sheegaya in ciidanka badda ee Itoobiya ay saldhig ku yeelanayaan Jabuuti, warkaasi ma ahan war rasmi ah," ayuu yiri.
Maxamed Idiris Faarax ayaa inta ku daray: "Ma heyno wax heshiis ah oo labada dowladood ay isla gaareen, haddii ay noqota in heshiis la gaarana wuxuu noqonayaa heshiis saddex geesood ah oo dhexmara Faransiiska, jabuuti iyo Itoobiya", sidaas waxaa BBC-da u sheegay safiirka Jabuuti u fadhiya dalka Itoobiya, Maxamed Idiris Faarax.
"Waxay ahayd dalab ka yimid ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo doonayay in ciidankaas la dejiyo dalka Jabuut, waxaa soo socdana wakhtiga ayaa inoo sheegi doonaa", ayuu hadalka ku daray safiirka.
Sarreeya Guud Birhaanuu Julaa oo wareysi ay la yeelatay wargeyska Addis Zemen oo afka dowladda ku hadlo ayaa sheegay "in Dolwadda Itoobiya ay ka shaqeyneyso sidii ay u dhisi lahayd ciidamo adag oo Badda ka howlgala."
"Ciidamada badda ee ay Itoobiya dhisaneysana waxay noqon doonaan kuwa tababar casri ah leh isla-markaana qalabkii ugu dambeeyey ee ciidamada badda adeegsada," ayuu yiri.